Famerenana ny peer - AfricaArXiv
Famerenan'ny mpiara-miasa dia ny fanombanana ny asa ataon'ny olona iray na maromaro manana fahaiza-manao mitovitovy amin'izany amin'ny maha mpamokatra ny asa (namanao). Miasa ho toy ny endrika fanaraha-maso ny tenan'ireo mpikambana mahay amina matihanina ao anatin'izany saha. Ireo fomba fijerin'ny mpiara-miasa dia ampiasaina amin'ny fitazonana ny fenitra kalitao, hanatsarana ny fampisehoana ary manome fahatokisana. In oniversite, famerenan'ny mpiara-mianatra matetika ampiasaina hamaritana taratasy akademikamety amin'ny famoahana.
Avy amin'i Wikipedia, mg.wikipedia.org/wiki/Peer_review
Hevitra mialoha ary ny famerenan'ny mpiara-mianatra
Ny sora-tanana preprint dia an'ny mpanoratra lahatsoratra ary matetika atolotra amin'ny diary hojeren'ny mpiara-miasa. Araka ny fomban-drazana dia tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana ny fizotran'ny fanadihadihana ny birao fanontana ao amin'ny gazety.
Ny rafi-pandinihan'ny namana dia tsy mitovy amin'ny fandinihana tsy fantatra anarana na 'jamba', ny jamba roa sosona ary ny hevitry ny mpiara-mianatra na miankina amin'ny fahalalàn'ny mpanoratra sy ny mpandinika momba ny mombamomba azy na tsia ary raha toa ka misy imasom-bahoaka ny tatitra momba ny fanadihadiana na amin'ny birao fanontana ihany. diary ary ny mpanoratra.
Ankehitriny, endrika isan-karazany ny famerenan'ny namantsika no misy ny anjarantsika eto. Ny sasany ireo mpiara-miasa aminay manome serivisy izay misy na manome fotodrafitrasa nomerika ho famoahana soratra sy famerenan'ny mpiara-miasa ny sora-tanana nataonao.
Mba hahazoana na manome valin-kafatra amin'ireo fanomanana nomanina ao amin'ny lampihazo AfricaArXiv, manolotra ireto safidy manaraka ireto izahay:
Lahatsoratra momba ny fiarahamonina momba ny PREreview
Ny iraka ataon'ny PREreview dia ny hitondra fahasamihafana bebe kokoa amin'ny fanadihadian'ny mpahay siansa amin'ny alàlan'ny fanohanana sy fanamafisana ny vondron'olona mpikaroka, indrindra ireo eo am-piandohan'ny asany (ECRs) hijerena ireo fanontana mialoha.
Ao amin'ny PREreview dia mino izahay fa tokony avela hanampy ny hafa ny mpikaroka rehetra amin'ny fandinihana ny asan'ireo mitovy taona aminy, raha mbola atao izany. amin'ny fomba mahasoa.
Hanofana mpikaroka hanome valiny mahasoa
Raha ny mahasamihafa azy dia raha ny fandinihana ny mpiara-miasa dia singa manan-danja amin'ny fanaparitahana siantifika, vitsy ny mpahay siansa no mandray fiofanana ara-dalàna ao.
Read more amin'ny content.prereview.org/about/
Alefaso amin'ny PeerCommunityIn
Peer Community in… (PCI) dia fikambanana siantifika tsy mitady tombony miorina ao Frantsa izay mikendry ny hamorona vondrom-piarahamonin'ireo mpikaroka manokana handinika sy hanoro hevitra, maimaimpoana amin'ny famoahana boky maimaimpoana ao amin'ny sahan'izy ireo.
PCI dia manome ny fizotrany fanolorana maimaimpoana ny fanomanana ara-tsiansa (sy lahatsoratra avoaka) mifototra amin'ny fandinihana nataon'ny mpiara-mianatra.
Submit ny fampitaovana ho any amin'ny PCI hijerena azy (ahoana no).
Manana ny fahazoan-dàlana ho an'ny PCI 20 andro hanapahana eo amin'ny fomba fiomanana.
Vantany vao noraisin'ny mpanolo-tsaina iray, dia voamarinin'ny fijerinao ny fiomananao mpandinika roa farafaharatsiny.
Mahazo ny famerenany sy ny fanehoan-kevitry ny mpandala mba hanomanana ny dika nohavaozina amin'ny nomaninao.
PCI dia manome modely ho anao amin'ny mpanoratra hanomana ny dikan-teny farany amin'ny lahatsoratra miaraka amin'ny logon PCI sy ny fitantarana ny fangatahana.
Navoaka tao amin'ny tranokalan'ny PCI ny fangatahana sy ny tatitra momba ny fandinihana. Ny kinova pdf ny fahazoan-dalana ho an'ny PCI sy ny tatitra momba ny famerenana dia azo arakin'ny mpanoratra toy fanampiny material.
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny PCI dia manome a Crossref DOI izay mifamatotra amin'ny rakitsoratra amin'ny preprint online
Amboary ny rakitsoratra nomaninao amin'ny sehatra AfricaArXiv anisan'izany ny fahazoan-dàlana ho an'ny PCI.
Mbola azo alefa ao amin'ny diary iray ny fiomanana azo atokana. Read more amin'ny peercommunityin.org/pci-friendly-journals.
Anitsate sora-tanana vita fanomanana miaraka Hypothes.is
Ny rindranasa navigateur sy tsoratadidy Hypothes.is manome alalana an-tsoratra na fanakianana eo amin'ny tampon'ny vaovaom-pitsarana, bilaogy, lahatsoratra siantifika, boky, fepetra momba ny serivisy, fandraisana andraikitra amin'ny fifidianana, lalàna ary maro hafa.
Indraindray antsoina hoe 'famerenan'ny mpiara-monina' anao dia azonao atao ny mamaky sy manoratra an-tsoratra sora-tanana mialoha amin'ny sehatra iray amin'ny mpiara-miasa aminay izay mampiasa Hypothes.is - na ho anao manokana na ataovy ampahibemaso ho an'ny mpampiasa hafa Hypothes.is.
Famandrihana OSF anisan'izany ny AfricArXiv / OSF ary serivisy fanomanana ny vondrom-piarahamonina hafa Hypothes.is mba hahatonga ny fampisongadinana ho an'ny besinimaro sy ny fanamarihana ho vakiana ao amin'ny PDF na iza na iza.
Read more amin'ny help.osf.io/...Annotate-a-Preprint ary web.hypothes.is/research/.
Resaho ampahibemaso izay lahatsoratra momba ny ScienceOpen
ScienceOpen dia sehatra fitadiavana fomba fijerin'ny manam-pahaizana mba hanatsarana ny fikarohana ataon'izy ireo an-tserasera, hanao fiantraikany ary hahazo crédit amin'izany.
Manomeza na mandray fandinihana ofisialy momba ny lahatsoratra momba ny fikarohana an-tapitrisany maherin'ny 60 tapitrisa ary rakitra an-tserasera amin'ny sehatra ScienceOpen. Vakio bebe kokoa amin'ny momba ny siansan.com/peer-review-guidelines/.
Via amin'ny AfricaArXiv Preprints fanangonana on ScienceOpen azon'ny mpanoratra hangataka ny mpikaroka hafa mba hanome famerenam-bahaolana manara-penitra momba ilay sora-tanana préparts mivantana amin'ny lampihazo ScienceOpen. Vakio bebe kokoa amin'ny scienceopen.com/collection/SOPreprints
Torohevitra momba ny etika ho an'ny famerenana ny namana
Mba hahazoana antoka ny fahamarinan'ny firaketana an-tsoratra ary hanamorana ny famerenana tsy miangatra sy ara-drariny ary ara-potoana, dia manoro hevitra ny hanaraka ny torolàlana an'ny COPE Council ho an'ireo mpandinika namana ianao, izay azo idirana amin'ny publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers.pdf
Mba hahazoana ny fankasitrahana imasom-bahoaka momba ny asa famerenana mandinika
hampidiro ny tatitra momba ny famerenana amin'ny AfricaArXiv aorian'ny famoahana ny asa nandinihana nataon'ny mpanoratra.
ampio ny DOI amin'ny lahatsoratra navoaka ho fanondroana
ho azo antoka fa manaiky ny mpanonta sy ny mpanoratra
misoratra anarana ny famerenana amin'ny publons.com.
Raha misy ny fanontaniana momba ny safidy famerenan'ny mpiara-monina amin'ny alàlan'ny sora-tanana pretra dia mifandray aminay info@africarxiv.org.
COPE Council. Torohevitra etika ho an'ny mpandinika mpinamana. Septambra 2017. | publicationethics.org
Tennant, JP, Ross-Hellauer, T. Ny fetran'ny fahatakarantsika ny famerenan'ny namako. Res Integrer Peer Rev5, 6 (2020). doi.org/10.1186/s41073-020-00092